Shiinaha Shiinaha warshadda iyo soosaarayaasha DIAMOND DIAMOND | Harada Wabiga
LIISKA DIAMOND -KA ENGLISH
Nala iftiimi waxay bixisaa ulaha iftiinka kalluumeysiga ee ugu tayada sarreeya qiimaha jumlada hoose. Our ulaha iftiimaya kalluumaysiga waa kuwo bay'ada u fiican, dillaaca & daadinta u adkaysta iyo huurka.
Sidee u shaqeeyaa ulaha iftiimaya kalluumeysiga?
Ulaha Kalluumeysiga ee Glow Glow waxay adeegsadaan falcelinta kiimikada si ay iftiin u soo saaraan. Kaabsalkii gudaha markii uu jebiyo ushii qaloocinta, falcelinta kiimikada ayaa dhacda oo usha dhalaalaysa ee kalluumaysiga ayaa bilaabanaysa inay iftiimiso.
Waa maxay sababta usha dhaldhalaalka kalluumaysigu ay gacan uga geysato qabashada kalluun badan?
Waxay ka dhigtaa sed si aad u iftiimiso si ay u soo jiidato kalluun badan
Waxay ka dhigtaa sed inay ka weyn tahay
Si wax ku ool ah u kiciya kalluunka niyadda dhexdhexaadka ah ama taban si ay u qaniinaan
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee kalluumeysiga habeenkii waa aragtida talooyinka. Dadka qaarkood waxay jecel yihiin inay adeegsadaan dawanno si ay uga digaan qaniinyada kalluunka. Si kastaba ha ahaatee, dawannadu waxay noqon karaan kuwo dhib badan in la qabto marka la tuuro ama la ruxo kalluunka. Ul dhalaalaya kalluumaysiga waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo dawanno si joogto ah loola socdo talooyinka usha.
Sidee ulaha iftiinka kalluumaysiga loogu dhejiyaa khadadka ama qabatooyin qallafsan?
Isticmaal gacmaha caagga ah ee la socda ulo si aad ugu dhegto qabsatooyin ama xariijimo. Ku dheji xadhig khafiif ah gacmaha, ka dibna geli usha khafiifka ah ee gacanta, iyada oo xadhigga dhuuban uu yahay mid adag, ku xidh xadhigga xarriiq ama jillaab. Qaar ka mid ah macaamiisheena ayaa sidoo kale cajaladda korontada u adeegsada ku dhejinta.
Ilaa intee bay dhalaalaan?
Ugu yaraan 6 saacadood.
Miyaanay sun ahayn? Iyo Midabkee la heli karaa?
Haa ma sun yihiin. La heli karo ee Cagaaran.
Xirxirida warshadeena: 2pcs/bac, 50bag/sanduuq gudaha ah, wadar ahaan 100pcs
Ganacsiyada kale ee xirxiraya madal: 5pcs/bac, 10bag/sanduuq gudaha ah, wadar ahaan 50pcs
Badeecadahayagu waxay ku xisaabtamaan 3/5 ee suuqa adduunka oo dhan.
Badeecooyin badan oo suuqa yaala ayaa nagu dayanaya, qaarna xitaa waxaa laga sameeyay qaaciddada alaabta jiilka kowaad. Wakhtiga luminescence ee wax soo saarka jiilka kowaad wuxuu ka yar yahay shan meelood meel ka mid ah badeecadeena hadda
Waxaan rajeyneynaa inaan ku abuurno iskaashi adiga！
Baakadaha : 2pcs/pack, 50pack/box, ama sida waafaqsan shuruudaha macmiilka
Jidka Bixinta: Badda ama Hawada iyada oo loo marayo UPS/ DHL/ TNT/ FEDEX iyo wixii la mid ah
Hore: TOBAN KOOBAAD BAALKII
Xiga: Squid jig jillaab shrimp alwaax
Ulluunka Glow Light Light
Ulaha Kalluumeysiga Ulaha Glow
ku dhaldhalaalaan kalluumeysiga mugdiga ah
ulaha dhaldhalaalka yar ee kalluumaysiga
usha glow kalluumaysiga habeenkii
Toos Warshadda φ4.5 Lysstick dheeman Ingiriis ah
TOBAN KOOBAAD BAALKII
Warshadda tooska ah L 2L 3L U taxanaha laydhka
5pcs/Bag 10 Saacadood Ulaha Ulo Flow Kalluumeysiga sabayn ...
50bag/Warshadda Tooska ah ee Sanduuqa Kalluumeysiga Glow Stick Fis ...
Laydhka dheemanka tooska ah ee japan